Shoes & Accessories :: Men Shoes :: [VANS] Core Classic Slip-On
Home/Shoes & Accessories/Men Shoes/[VANS] Core Classic Slip-On
[VANS] Core Classic Slip-On
Colour : BLACK/OFF WHITE BLACK/TRUE WHITE BLACK/BLACK TRUE WHITE/TRUE WHITE
Size :5Boys = 6.5 Women 5.5 Boys =7Women6Boys = 7.5 Women 6.5 Men= 8 Women7Men = 8.5 Women 7.5 Men =9Women 8 Men= 9.5 Women 8.5 Men= 10 Women9Men = 10.5 Women 9.5 Men = 11 Women 10 Men = 11.5 Women 10.5 Men = 12 Women 11 Men = 13.5 Women 11.5 Men = 13 Women 12 Men = 13.5 Women 13 Men= 14.5 Women
Minimum quantity for "[VANS] Core Classic Slip-On" is 1.
When it comes to casual weekenders, VANS never fails to impress. Energetic and youthful, this monochromatic, checkered pair is perfect for addingapunch of personality to your ensemble. Best of all, they're slip ons, making them super easy to wear.
Colour Black and White Checker/White
အလွယ်တကူ စီးရလွယ်ပြီး အကြမ်းခံ စတိုင်ကျတဲ့ Vans brand Slip-On ဖိနပ်ပါ။ outsole ရာဘာဖြစ်ပြီး ထိပ်ပိတ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇိုင်း ၄ မျိူးထိရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ၁၀၀ % ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည်။ အိမ်ရောက်ငွေချေစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
အလှယျတကူ စီးရလှယျပွီး အကွမျးခံ စတိုငျကတြဲ့ Vans brand Slip-On ဖိနပျပါ။ outsole ရာဘာဖွဈပွီး ထိပျပိတျပုံစံမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒီဇိုငျး ၄ မြိူးထိရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ ၁၀၀ % ပစ်စညျးဖွဈကွောငျးအာမခံပါသညျ။ အိမျရောကျငှခေစြေနဈဖွငျ့ ဝယျယူနိုငျပါသညျ။
​ALPHA_ကိုရီးယား action leather အပြော့စား for Men_91006
[Adidas] NMD_R1 SHOES
[VANS] Core Classic Old Skool Sneakers
[Adidas] ULTRABOOST ALL TERRAIN LTD SHOES